Luhlobo luni lwemicimbi ekufuneka sinikele ingqalelo kuyo ukubonisa kwe-LED yangaphandle?
Ukuboniswa kwangaphandle kwe-LED kugxile ngakumbi kulondolozo, olufumene umoya kunye nemvula. Ke kufuneka sikhethe umbandela ongcono, kwaye ngoku ngakumbi nangakumbi abavelisi bokubonisa i-LED ekhokelela kumgangatho ombi wesiboniso se-LED engeyiyo inkqubo efanelekileyo yokukhusela.
Indlela / inyathelo
Abathengi abaninzi abayicacelanga le nto emva kokuthengwa kwangaphandle kwe-LED kwaye benganikeli ngqalelo kwisiqinisekiso somgangatho.
Ukuboniswa kwangaphakathi nangaphandle kwe-LED ziindidi ezimbini zomgangatho wokusebenza, ekufuneka iimfuno zokubonisa ngaphandle kwe-LED kufuneka ziqwalasele ngakumbi imeko yangaphandle.
Nceda uqaphele la manqaku alandelayo:
1. Umboniso ufakelwe ngaphandle, rhoqo kwilanga nakwimvula, umoya kunye nokhuseleko uthuli, indawo yokusebenza engalunganga. Izixhobo ze-elektroniki ziya kufuma okanye zifume kakhulu ziya kudala isekethe emfutshane okanye umlilo, ubangele ukusilela okanye umlilo udale ilahleko.
2. Umboniso unokubangelwa kukuhlaselwa ngumbane okuqinileyo.
Ubushushu bendalo butshintsha kakhulu. Umboniso usebenza ngokwawo ukuvelisa ubushushu obuthile, ukuba amaqondo obushushu aphezulu kakhulu kwaye ubushushu bungalunganga, isekethe ehlanganisiweyo inokusebenza ngokungaqhelekanga, okanye ide itshiswe, ukuze inkqubo yokubonisa ingasebenzi kakuhle.
3. Abaphulaphuli ababanzi, iimfuno zombono, indawo ebanzi yeemfuno zombono, utshintsho olukhulu kukukhanya okukufutshane, ngakumbi, kunokuvezwa kukukhanya kwelanga.
Ukulungiselela ezi mfuno zingentla, umboniso wangaphandle kufuneka wenziwe kule micimbi:
Okokuqala, umzimba wescreen kunye nesakhiwo kufuneka zingqinelane ngokungqongqo ukuze kungangeni manzi kunye nobungqina bokuvuza.
Umzimba wesikrini kufuneka ubekwimilinganiselo elungileyo yokuhambisa amanzi, nje ukuba ukubakho kwamanzi kube nokukhutshelwa ngaphandle ngokutyibilikayo. Faka izixhobo zokukhusela umbane kwimiboniso nakwizakhiwo. Umxholo wokubonisa kunye neqokobhe lokugcina isiseko esihle. Kwaye ukuxhathisa umhlaba kungaphantsi kwe-3 ohms, umbane obangelwe kukukhutshwa kwangoko kwemeko enkulu yangoku.
Okwesibini, faka izixhobo zokungenisa umoya ukupholisa, ukuze isikrini ngaphakathi kubushushu phakathi kwe -10 10 -40 ℃. Kwakhona kufakwe i-axial fan emva komphezulu wesikrini, ngaphandle kobushushu.
Sebenzisa ubushushu obusebenzayo be -40 ℃ -80 ℃ phakathi kwe-chip-grade ehlanganisiweyo yesekethe yokuthintela ubushushu basebusika buphantsi kakhulu ukuze umboniso ungaqali.
Okokugqibela, ukuze kuqinisekiswe ukuba imeko-bume kwimeko yoluhlu olomeleleyo lwexesha elide, kufuneka usebenzise ukukhanya okuphezulu okuphezulu.
Ukubonisa ukukhetha imithombo yeendaba kukhetha i-engile entsha yokujonga ngokubanzi, umbala ococekileyo, ukulungelelaniswa okungaguquguqukiyo kunye ngaphezulu kwe-100,000 iiyure zokuphila. Ukupakishwa kwangaphandle kwendawo yokubonisa yeyona nto ithandwa kakhulu kwikhava esecaleni kwityhubhu yesikwere, itywina lesilicone, akukho ndibano yentsimbi. Inkangeleko yayo entle intle, yomelele, ine-anti ngqo yelanga, uthuli, amanzi, iqondo lobushushu eliphezulu, ezintlanu ngokuchasene “neempawu”.